Trump Oo Qorsheeyay In Muhaajiriinta ku Xidhan Maraykanka Lagu sii Daayo Magaalooyinka At ka Tiliyaan Dimuqeaadiga. | Awdalmedia.com
Trump Oo Qorsheeyay In Muhaajiriinta ku Xidhan Maraykanka Lagu sii Daayo Magaalooyinka At ka Tiliyaan Dimuqeaadiga.
Madaxweyne Donald Trump ayaa qiray inuu qorsheynayo in muhaajiriinta xiran uu ku fasaxayo magaalooyinka ay Dimuqraadiyiintu ku badan yihiin, arrintaas oo ah siyaasad uu xisbigaasi uga aargoosanayo.
Madaxweynahan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa waxuu bartiisa Twitterka soo dhigay in dadka sida weyn uga soo horjeeda ay aad ugu farxi doonaan fikradda ah "xudduudda furan iyo siyaasadda furan ee hubka".
Madaxweyne Trump ayaa shalay oo Jimca ahayd bartiisa tweeter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in sababo la xiriira xisbiga Dimuquraadiga oo diiday in wax laga badallo sharciyadda halista ah ee dhanka socdaalka ay yaguna sidii horeyba loo sii shaaciyay ka baaraan degayaan in dhammaan muhaajiriinta ay geeyaan magaalooyinka ay ka arrimiyaan xisbiga Dimoqaradiga.
Hadalkasi Trump ayaa dhabar jab ku ah aqalka cad ee mareykanka loogha arrimiyo oo dhawaan warbixin qoraal ah oo uu soo saaray ku beeniyay jiritaanka qorshahaasi.
Hadalkani ayaa sidoo kale ku soo beegmaya xilli warbaahinta Mareykanka ay sheegayeen in waaxda amniga gudaha ee dalka ay dooneyso in dhammaan muhaajiriinta xabsiyada ku jira lagu sii daayo gudaha magaalooyinka sharci ahaan dowladda federaalka u diiday in ay ka dhaqan geliso sharciyadeeda dhanka socdaalka.
Wargeyska The Washington post ayaa qoray in aqalka cad ee Mareykanka uu codsaday bilihii Nofembar iyo Febraayo ee la soo dhaafay in ay suurtagal tahay in muhaajiriinta ku xiran guud ahaan Mareykanka in loo wareejin karayo dhanka magaalooyinka ay ka midka yihiin New York, Los Angeles, San Francisco iyo Chicago.
Waaxda socdaalka iyo canshuuraha ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay arrintaasi ku gacan seyrtay, waxa ayna sheegtay in aan loo heli karin dhaqaalihii iyo awooddii arrintaasi lagu fulin lahaa.
Sida ku cad farriimo email ah oo lagu daabacay wargeyska the Washigton post , waaxdani ay walaac ka muujisay qaabta shacabka Mareykanka ay u arkayaan tallaabadaasi.
Aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa khamiistii la soo dhaafay warbixin qoraal ah ku sheegay in arrintaasi ay ahayd aragti la soo jeediyay oo kaliya balse markii dambe lagu gacan seeray.
Nancy Pelosi oo ah guddoomiyaha aqalka wakiillada Mareykanka isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga ayaa iyana arrintaasi ku gacan seyrtay oo ku tilmaantay mid aan macquul ahayn.
Maxkamad heer federal ah ayaa bishii August ee sanadkii hore laashay amar uu madaxweyne Trump dhaqaalaha uga jarayay magaalooyinka New York, Los Angeles, San Francisco and Chicago, sidoo kalena garsoore maxkamadeed ayaa toddobaadkaan laalay go'aan Trump uu ku adkeynayay codsiyada dadka muhaajiriinta ahi in ay magan gelyo ka helaan dalkaasi Mareykanka.
2,750 kamid ah dadkan ayaa qaab qaxootinimo ah isaga dhiibay magaaladaasi, halkaa oo laga siiyay guryo ay degaan.
Duqa magaalada Tijuana ayaa sheegay in muhaajiriin kale oo gaaraya toban kun ay rajeynayaan inay soo gaaraan magaaladiisa maalmaha soo socda.
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ay ka digtay in qofkii lagu hela inuu si sharci darro ah kusoo galay Mareykanka la xiri doono, dibna loogu celi doona dalkiisa.
Si kastaba, Xisbiga Dimoqaraadiga ayaa dhankoooda arintaasi kasoo qaaday wax aan suurogal ahayn, inkastoo mid ka mid ah meeyarada Dimoqaraadiyiinta uu sheegay inuu jeclaan lahaa soo dhaweynta muhaajiriintaasi.